Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. (igama endala lenkampani:. Foshan Prostar Science & Technology Development Co., Ltd) yi-ishishini labo imali yi-US, Taiwan kunye wase-China kunye ngaphezu kweminyaka emininzi imveliso kunye namava sorhwebo .
Prostar UPS yasekwa ngo-1998, onceda abantu kuyilo kunye nemveliso kwizinga eliphezulu le OEM kunye Prostar uhlobo ngayo kwimizi Uninterruptible Power Supply (UPS), Power Inverter, iiphaneli Solar, Power System yelanga kunye nenkqubo isizukulwana Umoya Power, kunye Emergency Power Supply ( EPS) kwakunye nokulondolozwa-free kwibhetri.
Prostar has a Design onamava kakhulu kwaye zobungcali kunye neSebe Uphando abasebenza ngokusondeleyo kunye nabathengi zophuhliso lwabo lwemveliso kwakunye uhlengahlengiso yanda Prostar uluhlu brand. Ezinye izinto ezibe negalelo ziquka Quality Umbindi Wolawulo, Purchasing & iZiko lweMveliso, kunye Sales kunye Customer Service Centre.
Prostar kukhona linoxanduva lokukhuthaza zoshishino kunye nenkonzo kwi wase-China. Ngokusebenzisa kweshumi iinzame ezinkulu, Prostar wenze ipowusta uthotho ndiziphethe ngayo izinto amandla kunye neebhetri esisetyenziswa ngokubanzi kwiinkalo yemali, Telecom, ugesi, ipetroli chemistry, ezemali kunye urhafiso China, kwaye ngembeko wathi ngabaxumi. Ukuthatha nokwenza iimveliso ezikumgangatho wehlabathi kunye sengqondo ngobungcali enyanisekileyo koxanduva, Prostar unyanzelisa zokufunda kunye ezintsha rhoqo ukuba sizama enyukela encochoyini omtsha lomsebenzi. Thina ngebhongo anamathele umoya "Ukunyaniseka, Intsebenziswano, Ukhuphiswano kunye neyilayo".
Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. anazo abasebenzi abaninzi abanamava zobugcisa, nabo bonke abasebenzi bethu baye ngokuxhomekeke uqeqesho lwengcali yobugcisa kunye neemviwo. Prostar wadlula ububhali ka ISO9001, ISO14001, CE, RoHS kunye (amazwe ehlabathini lonke ilungu ngaphezulu kwama-30) IQNet. Ulawulo engqongqo nangenyameko umgangatho unika abathengi ngokuzithemba okukhulu. Kangangeminyaka, imveliso Prostar ndiziphethe zabiwa ngokubanzi kulo lonke elaseYurophu kwakunye Affrica, Oceania, mpuma Asia, Umzantsi Melika kunye noMbindi Mpuma.
Esebenzisa uhlanganiso kunye nokubekwa kwindawo ephezulu kwezibonelelo, Prostar kujoliswe ukucwangcisela loMgangatho, Isakhiwo, Marketing, Fashion kunye Innovation. Ukusekela umgaqo 'yoMthengi Nentembeko Kuqala ", siyakholwa ukuba oluvela umgangatho eyiyo na efunekayo ngayo injongo yethu yokugqibela ngokwaneliseka. Simema bonke abathengi bethu ukuxhasa yaye sisebenze ngokusondeleyo kunye ukuze bazuze efanayo. Sinethemba sinako kuba inkonzo kwixa elizayo! Nayiphi na imibuzo, unako usithumelele i-imeyili apha info@prostar-cn.com.